Ity no tontonana voalohany an'ny Galaxy S8 sy ny Samsung Galaxy S8 Plus | Vaovao momba ny gadget
Ny vera voamarina eo aloha an'ny Samsung Galaxy S8 dia voasivana
Inona no lasa tafaporitsaka sy honohono izay ananantsika avy amin'ny Samsung Galaxy S8. Azo antoka fa tamin'ny taona lasa tsy nahazo fampahalalana marobe izahay an'ny telefaona taloha ary indrindra dia noho ny faniriana ananan'i Samsung izay ananantsika eo am-pelatanantsika ny fitaovana Android tsara indrindra natao hatramin'izao.
Androany amin'ny andro heverina fa sarin'ilay ho fitaratra antonony voalohany an'ny Samsung Galaxy S8 sy ny Galaxy S8 Plus. Sary voasivana izay manondro ny famolavolana mpanjaka an'ny sainam-pirenena ity ary izany dia manome fampahalalana tena lehibe momba ny sasany amin'ireo lafin-javatra lehibe indrindra an'ity telefaona ity, toy ny fanamafisana ny tsy fisian'ny bokotra an-trano.
Ny iray amin'ireo fanamafisana dia ny fanesoran'i Samsung amin'ny fomba tsy voafaritra hoe inona izany endrika mahazatra kokoa ary fisaka hanomezana vahana ireo takelaka roa sosona izay miatrika ny dingana afovoany indray amin'ny fanombohana avy amin'ny mpamokatra Koreana tahaka ny nitranga tamin'ny Galaxy Note 7 ratsy tarehy.
Manasongadina ihany koa ny bezel manify be eo ambony sy ambany rehefa mpanamboatra hafa izy ireo, toa ny Google Pixel, izay miloka amin'ireo matevina kokoa. Ireo bezel manify ireo dia misy ifandraisany amin'ny fikasana hitondra smartphone amin'ny Mi MIX tsy misy bezela ary nahasarika ny sain'ny rehetra izany rehefa natolotry Xiaomi tamin'ny faran'ny taona lasa.
Ny sensor sensor amin'ny Galaxy S8 sy S8 Plus dia mety ho atsofoka eo anoloana toy ny telefaona tsy misy bezel an'i Xiaomi ihany. Ny refin'ny efijery amin'ireo terminal roa dia 5,7 santimetatra ho an'ny Galaxy S8 sy 6,2 santimetatra ho an'ny Galaxy S8 Plus, noho izany ireo bezela manify ireo dia namela an'i Samsung hanao ny efijery ho lehibe kokoa hanakaikezana ny iray amin'ireo fironana ankehitriny amin'ny terminal tontonana lehibe kokoa ho an'ny fanaovana kopia tsaratsara kokoa ny karazana atiny multimedia.
Hatreto dia fantatray izay ho avy natolotra tao amin'ny MWC tamin'ny mpanao gazety, amin'ny 29 martsa ny hetsika fandefasana azy ary amin'ny faran'ny volana aprily dia hamely ny tsena izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ny vera voamarina eo aloha an'ny Samsung Galaxy S8 dia voasivana
LG dia hanolotra ny LG G6 amin'ny 26 Febroary
Sony anisan'ireo voalohany nohamafisina tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny MWC 2017